China Simple Single drawer bedroom nightstand side cabinet # 0122 rụpụta na Factory | Yamazonhome
Obere ụlọ na-adọkpụ ụlọ ndozi abalị n'akụkụ ụlọ # 0122
Nọmba nlereanya: Amac-0122
Nha: 350mm * 500 * 580mm
Single drawer nchekwa bedside table
Niile ahọpụtara ahịhịa siri ike na gburugburu ebe obibi dị mma, nke siri ike ma sie ike, nke siri ike ma na-adịgide adịgide, ezigbo ngwongwo na ọnụ ahịa ziri ezi, na ihe jupụtara na ya. Cabinetlọ kabinet ahụ agbatịkwu ma sie ike, dị nro ma sie ike, dị mfe ihicha. White oak na-alụ ọgụ ozugbo, na-enweghị atụ egwu baptism nke afọ. N'ikwekọ na ọkọlọtọ mba ụwa nke "mgbochi mgbochi na mgbochi nrụrụ", anyị na-ahọrọ nnukwu osisi oak nke si North America webata, agwakọtala bọọdụ ọ bụla, ọ bụghị ọkọlọtọ, ma jụ ịlacha. Naanị mee arịa ụlọ maka ndị mmadụ.
Multi-oyi akwa nchekwa osisi siri ike n'akụkụ kabinet
Ebe nchekwa nchekwa di iche-iche ma nke onwe ma nke oghe. Nchikota nke oghere mepere emepe na drawer mechiri emechi na-eme ka ebumnuche nke nnukwu ikike ma na-egbokwa mkpa dị iche iche nke ndị dị iche iche. Okpokoro ihe ndina dum na-agbaso nhazi nke ihe dum na ihe osisi, nke na-eme ka ọ ghara ikwekọ na nkwekọ osisi ahụ, kamakwa ọ na-ebelata mgbawa na oke, nke bụ ule nke ọrụ na ihe na-eri oge.
Họrọ North American elu-edu ọcha oak
Enwere ike imechi drawer dị elu iji debe ụfọdụ ihe onwe onye, ​​akwụkwọ edetu, akwụkwọ asambodo, wdg. Mpaghara mepere emepe na ala nke ala nwere ike ijide ihe ọgụgụ, ekwentị mkpanaaka, IPAD, wdg tupu ị lakpuo iji gbochie ájá. Enwere ike idobe elu obosara na anya na ihe ndị ọzọ.
Enweghị iguzogide ịdọrọ okporo osisi okporo osisi siri ike
Okporo osisi na-agba osisi siri ike, na-agbachi nkịtị ma na-adọkpụ, dị nro na enweghị nguzogide, zere nsogbu nke nchara, na-adịgide adịgide handlegba osisi siri ike dị mfe ma mara mma, na teknụzụ agbakwunyere na-azọpụta ohere ma nwee ahụ iru ala. Ogologo uzo dabara na obosara nke mkpịsị aka mmadụ, ọ dịkwa mfe imeghe ma mechie.
Enyi na enyi na nke dị ogo nke akụkụ 45
Ejirila okpokoro okpokoro okpokoro nke 45 mee ka ọ dị gburugburu ma dị mma iji gbochie nkwụsị. Igosipụta n’amaghị ama, ileghachi anya n’azụ, nwere ike ịbụ oge achọrọ ị zute gị. Ọ dịghị mkpa ka ụma jiri ihe mgbagwoju anya, laghachi na ebumnuche mbụ ma mee ka mgbagwoju anya dị mfe.
Cabinetkwụ na-atụ ike nke na-agwakọta ejiji na ọdịdị
Akụkụ osisi ndị siri ike nke mejupụtara tebụl osisi siri ike jikọtara ya na njiko ọla na-eme ka ọ dịkwuo mma ma kwụsie ike. A na-egosipụta njikọta nke ejiji na okike na nkọwa ndị na-adịghị mma. Ọ pụtara eke na-enweghị mgbanwe, na-ejigide ihe okike nke osisi okike, udidi ahụ siri ike ma doo anya, dị mfe ma bụrụ ihe okike.
Nke gara aga: Grooved aka abụọ-na-eru n'akụkụ àkwà osisi siri ike n'akụkụ kabinet # 0121
Solid Wood High na Low Bar oche Cafe sadulu S ...
Modern Minimalist White Oak Solid Wood Coffee T ...
Adịcha ụlọ nkịta na-adịghị akwụ ụgwọ maka anụ ụlọ
Heller Animal Hutch na Ramp Oke oyibo Hutch Pet ...
6lọ Ntu anụ ụlọ dị obere na obere ụlọ Pet 0269